Para Lawka (1) | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
Para Lawka (2)- Nanabawa and their Weight →
January 7, 2010 · 6:57 pm
Para Lawka (1)
ကျွန်ုပ်နှင့် ပရလောက တွေ့ကြုံသိကြားသမျှ (၁)
(ဤ အကြောင်းအရာများထဲ၌ ပါဝင်သူအများစုမှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိကြသေး၍ နာမည်များ ဒေသများကို လွှဲ၍၊ ခြုံငုံ၍ ရေးထားပါသည်။)
ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာမကြီး ကြည်ဦး (ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသော ဇာဂနာ၏ မိခင်) ရေးသည့် “ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် ပရလောကနယ်” ဆိုသည့် စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း သတိတရဖြစ်လာသော အကြောင်းများ ပေါ်လာပါသည်။ ပရလောကနှင့်ဆိုင်သည့် တွေ့ကြုံကြားမြင်ခဲ့ရသည်များ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုထိုဤဤ မရေးမီ တစ္ဆေ သရဲ ဝိဉာဉ်လောကတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စကားခံရပါဦးမည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှင့် မိတ်ဆွေများက ကျနော့်ကို ဘာသာအယူဝါဒ မရှိသူဟု သိကြပါသည်။ သို့သော် ပရလောကကို ကျနော် လက်ခံထားပါသည်။ သို့သော် ကိုယ့်ကိုယ်လာပြီး ဖြဲခြောက်မလား၊ ဂုတ်ချိုးမလားဆိုပြီး ရမ်းဆမဲ့ ယုံထားသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ သူတို့လည်း သူတို့ အလွှာ (ဘုံ)နဲ့၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဝန်းကျင်နဲ့ ဟု ယူဆလက်ခံထားပါသည်။ (ဤအခြေအနေကို ရူပဗေဗေဒသဘောနှင့် ရှင်းပြသော ဦးဥတ္တမဘွဲ့တော်ရ ဆရာတော်တစ်ပါးရေးသည့် စာအုပ် ရှိသည်။)
ယခုရေးမည်မှာ ကျနော် ရှင်းမပြနိုင်သော၊ ငြင်းမရနိုင်သော ကိုယ်တွေ့ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဝန်းကျင်မှ အဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကူးယဉ် တီထွင်၊ အလှမ်းဝေး တဆင့်ကြားများ မပါပါ။ ကျနော့်အသက်အရွယ်နှင့် ဤသို့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကြုံဖူးခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းဝတ်ဖြင့် မြို့မကျောင်းတိုက်၊ အနောက်တော တောရကျောင်း၊ ဝါဆိုဦး စသည့် ဘာသာရေးနယ်ပယ်များတွင် နှစ်နှင့်ချီ၍ နေဖူးခြင်း၊ ထူးဆန်းသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် နေခဲ့ရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။
ရေးမည်ဟု စိတ်ကူးနေသည်မှာ ကြာပြီ။ ဘာတွေရေးမလဲ စဉ်းစားသောအခါ ရေးလတ္တံ့သော အကြောင်းအရာတို့သည် စီကာစဉ်ကာ ပေါ်ထွက်လာလေသည်။
အဖွားအိမ် ဒမြတိုက်ခံရခြင်းနှင့် နာမ်လောက
ကျနော့် မိခင်ဘက်က အဖွားသည် ထူးဆန်းသော မိန်းမကြီးဖြစ်ပေသည်။ ယခုတိုင် သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးသည်။ သူစ၍ ထူးဆန်းသည်မှာ သူ့အိမ် ဓားပြတိုက်ခံရစဉ်က စသည်ဟု ကြံကြံဖန်ဖန် ဆိုရပေမည်။
အဖွား၏ မိခင်အနွယ်များသည် ခေတ်ပျက်သည်တွင် အထက်မြန်မာပြည်မှ လှေကြီးနှင့် ဆွေမျိုးတစ်စုတင်ကာ အောက်ပြေ၌ အခြေစိုက်၍ ရွာတည်ကြလေရာ ယနေ့တိုင် ထင်ရှားရှိသည်။ အဘေးကြီးများ၏ အမည်နှင့် စေတီ၊ တံတားများလည်း ရှိနေသေးသည်။ သူတို့မှာ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေလည်း ပါလာသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ချမ်းသာကြခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အဖွားလက်ထက်တွင် ခင်ပွန်းဆုံးပါပြီး မုဆိုးမအဖြစ် ထိုရွာမှာပင် နေသည်။ ကျနော့် အမေက အကြီးဆုံး သမီးဖြစ်ပြီး အမေ့အောက်တွင် ဦးလေး (ဥစ္စာစောင့်မနှင့်တွေ့၍ သူအရက်ပြတ်ပုံကို နောက်ပိုင်းတွင် ရေးမည်။) ပြီးတော့ အဒေါ်နှစ်ယောက်။ လိုရင်းတိုရှင်းပြောရရင် ခေတ်ပျက်ကြီးမှာ ရွာကသူဌေးလည်း ဖြစ်ပြန်၊ မုဆိုးမလည်းဖြစ်ပြန်တော့ ဓားပြတိုက်ခံရသည်။ ဦးလေးက ထိုစဉ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသား အရွယ်မျှသာ ရှိသေးသည်။ လူကို အန္တရာယ်မပြုဘဲ ဓားပြများက ပစ္စည်းများကို ယူသွားလေသည်။
အမေတို့မောင်နှမ တစ်သိုက်ကလည်း ဘာလုပ်ရမယ်မသိ။ အဖွားကလည်း အခန်းထဲဝင်ကာ စိတ်အကြီးအကျယ်ပျက်နေတော့သည်။ ထိုခေတ်ထိုကာလ ညကြီးမိုးချုပ် ဘယ်ပုလိပ်မှ ထွက်ခေါ်၍မရ။ ထိုအချိန်တွင် ထူးဆန်းသော အခြင်းအရာတို့ ဖြစ်လေသည်။ အမေတို့ မောင်နှမတစ်စု ရုံးစု၍ ခပ်ကုပ်ကုပ်နေကြစဉ် အဖွားသည် စောင်ကို ကုလားမ ဆာရီကဲ့သို့ခြုံကာ အခန်းထဲမှ ထွက်လာလေသည်။
အမေတို့မောင်နှမက ‘တို့အမေတော့ ပစ္စည်းတွေဆုံးတာနဲ့ စိတ်များနောက်သွားသလား’ဟု ထင်မိလေသည်။ အဖွားသည် ပါးစပ်ကလည်း (ဦးလေးအဆိုအရ) ဟင်ဒီစကားများ တတွတ်တွတ်ပြောလေသည်။ အဖွားသည် သေစာရှင်စာမျှ တတ်သူဖြစ်ရာ အခြားဘာသာစကားကို တတ်သူမဟုတ်ချေ။ အဖွားပြောသမျှကို အမေတို့ မောင်နှမ တစ်သိုက် ဘာမှ နားမည်။
ခဏနေတော့ ဦးလေးကို အနားခေါ်ပြီး ကုလားလို အသားနာမည်တစ်မျိုးကို ပြော၍ သိသလား ဟု မေးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဦးလေးက ‘သိပါတယ်၊ အမဲသားကို ပြောတာ’ ဟု ပြန်ဖြေလျှင် ‘အေး အဲဒီအသားကို မစားကြနဲ့’ ဟု မှာလေသည်။ ဆက်ပြီး ဗမာသံဝဲဝဲနှင့် ‘ဓားပြတွေကို ဦးမင်းကျော် ဓားနဲ့လိုက်နေတယ်၊ မပူနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ရမယ်၊ မနက် ထန်းတောထဲ သွားရှာ’ ဟု ဆိုကာ ကုလားမနတ် ထွက်သွားပြီးနောက် အဖွားလည်း သတိလည်လာပြီး ဘာဖြစ်သလဲဟု မေးမှ အမေတို့က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ပြောပြရသည်။ (သူပြောသည့် ဦးမင်းကျော်မှာ ပခန်းကိုကြီးကျော်နတ်ကို ဆိုလိုဟန်တူသည်။ နောက်တဖန် ကျနော် စဉ်းစားသည်မှာ မြန်မာနတ်တွေနဲ့ ကုလားနတ်တွေဟာ ဘော်ဒါတွေပါလားဟု တွေးမိပြီးနောက် တရုတ်နတ်တွေနဲ့လည်း ဘော်ဒါဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဟု ဆက်တွေးမိပါသည်။)
သူပြောသည့်အတိုင်း မနက်စောစော လူစု၍ ထန်းတောထဲမှာ ရှာရာ ဓားချက်များနှင့် ဓားပြများကို တိုက်ယူသွားသော ပစ္စည်းများနှင့်တကွ ပြန်တွေ့သောဟူ၏။
ထိုအချိန်မှစ၍ အဖွားတို့ မိသားစု အမဲသားမစားသည်မှာ ကျနော် ဆယ်တန်းရောက်သည် အထိပင်။ ကျနော်က စဖောက်၍ အယူမရှိ စားမိစားရာ စားသည်။ သေစာရှင်စာလောက် တတ်သော အဖွားသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားရှိခိုးရင်း ‘ပူး’ သကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ ထူးဆန်းသည့် ဘာသာစကားများကို ရွတ်လေ့ရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်က ပြန်သွားစဉ် အဖွားရွတ်သံများကို နားထောင်ရာ ပါဠိလည်း မဟုတ်ဘဲ၊ ရှေးသက္ကတစာများနှင့် တူသည်ဟုသာ သတိပြုမိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ပညာရှင် အတော်များများက မာဂဓသည် ပါဠိစကား၊ မာဂဓဘာသာစကားကို တိရစ္ဆာန်များပါ နားလည်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ အဖွားသည် အမှတ်မထင် တခါတရံ သူမွေးထားသော နွားများ၊ အစာလာစားသော ငှက်များကို စကားလှမ်းပြောတတ်ပါသည်။ သူပြောသည့် စကားသံမှာ နားထောင်ကောင်းလှသော်လည်း နားမလည်ပါ။ ရှေးဟောင်းသက္ကတဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟုသာ ထင်ရသည်။ သူ့နွားများမှာ နွားသတ်ရုံမောင်းအသွား လမ်းခုလတ်တွင် သူတွေ့လာ၍ ဖြတ်ဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ စိတ်ကြည်သော အချိန်၌ အဖွားပြောတာ ဘာသာသာလဲဟု မေးလျှင် တိရစ္ဆာန်တွေ နားလည်တဲ့စကားဟု ဆိုလေသည်။ ဒီတစ်ခါမြန်မာပြည်ရောက်ရင် သူဘုရားရှိခိုးရင်း အလိုလိုရွတ်တဲ့ အဲဒီဘာသာစကားကို အသံဖမ်းထားမယ်ဟု အကြံရှိပါသည်။ သူဘယ်တော့ သေမည်ကို ကြိုပြောထားပြီဖြစ်ရာ အခွင့်ကြုံမကြုံကို မသိနိုင်ပြီ။
အဖွားသည် စိတ်ရှိပါက နတ်ပူးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဖြစ်ဟောတတ်သည်။ သူ့ကို အနာဂတ် ရှေ့ဖြစ် အတင်းဟောခိုင်း၍လည်း မရချေ။ သူစိတ်ပါမှ (အာရုံရမှ) လုပ်သည်။ အများအားဖြင့် လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြောသည်။ ဗေဒင်မဟုတ်ချေ၊ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်လို ပေါ်လာတာ သူကြည့်ပြောတာပဲဟု ဆိုသည်။ သူသည် အိမ်တွင် နတ်စင်တွေ မထားချေ။ အလုပ်ရှုပ်တယ်ဟု ပြောလေသည်။
ဤထူးဆန်းသော အဖွားကို ကျနော်တို့ မြေးများက ‘ပဲခူးအမေကြီး’ ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ သူသည် ပဲခူးတစ်နေရာ၌ နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(နောက်ပို့စ်တွင် ဥစ္စာစောင့်နှင့်တွေ့ပြီး အရက်ပြတ်သော ဦးလေးအကြောင်း ရေးပါမည်။)
6 responses to “Para Lawka (1)”
wow… great !!! waiting next article ….
ခင္ဗ်ား အဘြားကုိ ပူးတဲ့ ကုလား တေစၧက နာမည္ေက်ာ္ ကုိမင္းေက်ာ္ နဲ႔ ေဘာ္ဒါလည္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ နာမည္ကုိ ယူသုံးလုိက္တာေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ (Ahlataya)
နတ္ပူးတဲ့ကိစၥ ဖတ္လို႔ေကာင္းသလို စိတ္၀င္စားဖို႔လည္းေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခါမွေတာ့ ကိုယ္တိုင္မၾကံဳဖူးေသးပါဘူး။ ပရေလာကအေၾကာင္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ သိခ်င္တာတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကိုသင္ကာက ဗုဒၶဘာသာရဟန္း၀တ္နဲ႔ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီေနၿပီးေတာ့မွ ဘာေၾကာင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒမရိွသူျဖစ္သြားရသလဲဆိုတာေလးပါ။
လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ တုိ႔ ဂမၻီရတုိ႔ သည္းထိတ္ ရင္ဖုိ တုိ႔ ပုိ႔ပါလားဗ်…ဟီး…
နတ္က ဦးမင္းေက်ာ္ သက္သက္ ရွိေသးတယ္..ပခန္း ကုိၾကီးေက်ာ္က သက္သက္ဗ်…။
အိမ္မွာ စာအုပ္ေတာ့ ရွိတယ္..ေသခ်ာ မမွတ္မိလုိ႔…။
အၾကံ ထပ္ေပးပါဦးမယ္ဗ်….။ ထူးေထြ ဆန္းျပား ပရေလာကဆုိျပီး စာအုပ္ ထုတ္ဗ်…။ ဘတ္ဆဲလား ျဖစ္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္…ဦးသင္ကာေရ….း)
ဦးမင္းေက်ာ္၊ ပခန္းကိုၾကီးေက်ာ္၊ ပခန္းဦးမင္းေက်ာ္ ဆိုတာ တစ္ေယာက္ထဲပါဗ်။ ခင္ဗ်ားလုပ္မွ မင္းေက်ာ္ Clone ျဖစ္ေတာ့မယ္။